အမျိုးသားတေးသံရှင် ၅ ဦးနဲ့ စီးရီးခွေထွက်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ကေကေမိုး - Popular
ကျွန်မသီချင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေအားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့တေး သံရှင်ကေကေမိုးက အခုဆိုရင်တစ်ကိုယ်တော်အခွေထွက်တာ တစ်နှစ် ပြည့်သွားပေမယ့် ဒီသီချင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ ရပ်တန့်မသွားသေးပါ ဘူး။ FM တွေမှာလည်း အမြဲကြားနေရတဲ့သီချင်းပါ။ ကျွန်မသီချင်း လေး သူ့လက်ထဲရောက်လာတာ ကံကောင်းပြီး အခုလို အားပေးမှုတွေ ရရှိနေတဲ့အတွက်လည်း ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ကေကေ မိုးက ဆိုပါတယ်။ ကေကေမိုးကိုတော့ ပရိသတ်တွေက သီချင်းအေး အေးလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ လည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းပါပဲလို့ဆိုတဲ့ ကေကေ မိုးက . . .
”ကေကေကိုယ်တိုင်ကလည်း သီချင်းအေးအေးလေးတွေဆိုရတာ ပိုပြီးအားသန်တယ်။ အမြူးဆိုလည်း လုံးဝ EDM အမြူးပေါ့။ အေး အေးဆိုလည်း ပေါ့ပ်သီချင်းအေးအေးချိုချိုလေးတွေ၊ ကိုယ်ကလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အကြိုက်တူတူပဲဆိုတော့ ကိုယ်သီချင်းတွေ ဖန်တီးတဲ့ အခါမှာလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အဲဒါကြောင့် အဆင်ပြေနေတာပေါ့”လို့ ပြောပါတယ်။ ကေကေမိုးကသီချင်းအသစ်တွေလည်း ထွက်ဖို့ကြိုးစား နေသလို ပြိုင်ပွဲအသီးသီးကတက်လာတဲ့ အမျိုးသားတေးသံရှင် ၅ ဦးနဲ့ အတူသီချင်းခွေတစ်ခွေ ထွက်ရှိဖို့လည်း စီစဉ်နေပါတယ်။ တေးသံရှင် အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂီတလောကထဲဝင်ရောက်တဲ့အခါ အခက် အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဂီတလမ်းကြောင်း အစမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး . . .
”ကေကေတို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြိုးစားနေရတဲ့လူငယ်တွေ အတွက် ကတော့ အခွေထွက်နိုင်မှပေါ့။ အခွေထွက်မှလည်းကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်မှာလေ။ အခွေထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရယ်၊ အချိန်တအား ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်။ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေက တစ်နှစ်ထဲမှာ လပိုင်းလောက် နဲ့ အခွေတစ်ခွေ ပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်ပေမယ့် ကေကေတို့ကျတော့ ပိုက် ဆံစုပြီးမှလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ သူများထက် အချိန်ပိုပေးရတယ်။ ငွေရှိ မှလုပ်နိုင်မှာဆိုတော့ ငွေစုလိုက်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ အဓိကတော့ အချိန် ရယ်၊ ငွေကြေးရယ်က ကေကေတို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ပစ္စည်းတွေပြတ်သွားအောင်ဈေးရောင်းကောင်းတဲ့ စိုးညီအစ်မ တို့ရဲ့ မင်းသမီး ပိုးထည်တိုက်
ဂီတမှာသာမက ကိုယ်ပိုင်အမှတ် တံဆိပ်မှာလည်း အောင်မြင်နေဆဲစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
သီဆိုပြိုင်ပွဲ တစ်ခုက အကဲဖြတ်ဒိုင် အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ငြင်းပယ် လိုက်တဲ့ အဆိုတော် မင်းသား စိုးသူ 171 views
Line Walker-2 ဟောင်ကောင် အက်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မြန်မာပြည်က Hit-Man Killer တစ်ဦးနေရာက မြင်တွေ့ရမယ့် မင်းရာဇာ 134 views
သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ စူပါပါဝါက ဘာလဲ 109 views
စက်တင်ဘာလ မွေးနေ့ထဲမှာ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်မယ့် ရှင်ဖုန်း 73 views
ဘယ်စာကိုမောင်ဖန်မတုံး 49 views
သဝန်တိုတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ အမြဲတမ်းခဏခဏ ပြဿနာတက်ရတယ် သန္တာဗိုလ်
သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဆိုတာ အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ရတယ် မေသဉ္ဇာဦး
ဈေးကွက်အရ ချုံ့ရိုက်ကူးလာရတာ ဖြစ်ပေမယ့် အနုပညာ အားထုတ်မှုကတော့ လုံးဝမလျော့ပါဘူး သူရိယ
အသက်၈၇နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်လေးဆွေ အကြောင်း ပြောပြတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဧကရီစုစံ